Ra?iisal Wasaaraha oo kormeeray xeryaha ciidamada ee magaalada Muqdisho – Radio Daljir
Ra?iisal Wasaaraha oo kormeeray xeryaha ciidamada ee magaalada Muqdisho
Febraayo 16, 2013 9:27 b 0
Sabti, February 16, 2013—-Ra?Iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maanta booqday qeybo ka mid ah saldhigyada ciidanka ee magaalada Muqdisho iyo Isbitaalkii Xoogga Dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ka soconayaan dayactir dib loogu dhisayo.
Booqashadan ayaa Ra?iisal Wasaaraha waxaa ku wehliyay Wasiirka Gaashaandhigga Mudane Cabdixakiin Maxamuud X. Faqi iyo saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka, waxaana ugu horeyntii Ra?iisal Wasaaruhu u kuurgalay Isbitaalkii Ciidanka Xoogga kaas oo ay ka soconeyso dayactir dib loogu dhisayo qeybihii Isbitaalka.
Ra?iisal Wasaaraha ayaa sheegay in Isbitalku uu muhiimad gaar ah u leeyahay askarta dowladda isla markaana lagula soconayo caafimaadkooda iyo daweyntooda, wuxuuna R/wasaaruhu ku soo wareegay qeybaha Isbitalka iyadoo ay soconeysay dhismaha qeybaha Isbitaalka.
Sidoo kale, Ra?iisal Wasaaraha ayaa booqday Xeradii Tababarka ee Jaalle Siyaad, waxaana halkaasi uu kula kulmay saraakiisha ciidamada iyo kuwa Burundi ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM. Wuxuuna sidoo kale, Ra?iisal Wasaaruhu tegay Wasaaradda Gaashaandhigga oo si weyn loo dayactiray asagoo soo kormeeray qeybaha Wasaaradda.
Ra?iisal Wasaaraha ayaa booqday Xeradii Guulwadeyaasha oo fariisin u ah ciidamada Dowladda, waxaana halkaasi ka soconayay dayactir ballaaran iyadoo halkaas ay warbixin ku siiyeen saraakiishii joogtay.
Ugu dambeyntiina, Ra?iisal Wasaaraha ayaa warbaahinta uga warbixiyay ujeedada kormeerkiisan, wuxuuna xusay inuu u kuurgalayay xaaladda goobaha ciidamada iyo dayactirka ka soconaya, isagoo sheegay in xarumahan la dejin doono dhamaamba ciidamada gudaha magaalada ku sugan, si loo sugo amniga magaalada.
Wasaaradda Xanaanada xoolaha Puntland oo tababar usoo xirtay dhaqaatiir ka shaqeynaya daryeelka caafimaadka Xoolaha.
Wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan oo Gaalkacyo soo gaaray